Sida Khaatumo iyo Somaliland u wada hadli karaan – Qore Liban Axmed. – Radio Daljir
Mid ka mid ah mabaadii?da ka soo baxay shirkii qurba-joogta SSC ku yeelatay London sanadkii hore ( 2011) wuxuu ahaa: adeegsiga wada-hadal siyaasadeed oo nabad ku salaysan si wax looga qabto iska hor imaadyada hubaysan. Tan iyo intii la sameeyay maamulka Khaatumo dhowr dagaal baa dhacay. Taas macnaheedu ma aha maamul-samaynta iyo iska hor imaadyada hubsaysan way isku xidhan yihiin.
Madaxda Khaatumo way ku celceliyeen inay diyaar u yihiin wada hadal inay la yeeshaan maamulka Somaliland. Meesha la isku maandhaafsan yahay waa sida wada hadalku u dhici karo. Maamulka Somaliland wuxuu doonayaa in hab beeleed loo wada hadlo; wuxuu maamulkaasi rumaysan yahay in iska hor imaadyadu ay dhex mareen beelo. Maamulka Khaatumo wuxuu rumaysan yahay inay labada maamul wada hadal yeeshaan waayo iska hor imaadyadu waxay dhex mareen laba maamul. Labada badheedhe kuma wada salaysna runta waana sababta ay iska hor imaadyadu u soo noqnoqonayaan.
Si ismari-waaga loo jebiyo waxaan soo jeedinayaa inay maamulka Khaatumo iyo xubnaha ku abtirsada beesha maamulka Khaatumo samaysatay hase ahaatee ka mid ah maamulka Somaliland wada hadal yeeshaan waayo dhibaatada siyaasadeed oo maanta taagan waxay ka timid ismaandhaafka madaxda siyaasadeed ee beesha maamulka Khaatumo loo sameeyay.
Wax badan baa laga wada hadli karaa.Qodobka ugu horreeya oo isu soo dhoweyn kara raga wada hadalka uga kala qayb-galaya labada maamul waa: labaatan sano ka hor deeganada beesha maamulka Khaatumo taageerta may ahayn goob dagaal. Sidee baa jiidda dagaal looga fogeyn karaa deegaanada beeshu degto? Weydiintan waxay la xidhiidhaa mabda?a adeegsiga wada hadal nabadeed. Waa inay madaxda Khaatumo iyo G10 ku baraarugaan waxtarka mabaad?iida ay dejiyeen. Wada hadalku wuxuu sal u noqon karaa oo kale dejinta mabaa?dii bulsho iyo kuwo siyaasadeed ka badbaadin kara dadka ismaandhaafka siyaasiyiinta oo keena nabadgelyo darro.